July | 2010 | Zizawa's refuge
Posted by zizawa ⋅ 16/07/2010 ⋅ Leaveacomment
So who really killed Aung San? BBC producedadocumentary about the assassination to mark its 50th anniversary. Some of you may have already watched this program. Anyway for those of you who haven’t, you might want to look at the event which transformed our dreams intoaprolonged nightmare. Did U Saw act alone … Continue reading →
ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံး အဆိုဖြစ်တဲ့ ဗမာ့လူအဖွဲ့အစည်းတွင်းက ဓလေ့ထုံးတမ်း စဉ်လာတွေမှာ မိန်းမကိုနှိမ့်ချဆက်ဆံမှု၊ အထင်အမြင်သေးမှုတွေဟာ ထင်ထင်ရှားရှားပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မထင်မရှားဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ရှိနေတယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ခုရေးမယ့်စာမှာ ဒီအဆိုကို အကျယ်ထပ်ပြောမယ်။ တကယ်တော့ ဒီထင်မြင်ချက်ကို ကျွန်တော်စကားပြောဖြစ်တဲ့လူ အတော်များများက လက်ခံတယ်။ ဒါကိုခု comment section မှာထားခဲ့တဲ့ စာတွေမှာရော၊ fb ပေါ်ကရေးသားချက်တွေ အရရော၊ အပြင်မှာ စကားပြောချက်တွေ အရပါသိရတာ။ ဒါပေမယ့် တချို့ က ဒါကို လက်မခံချင်ဘူး။ ဒါဟာ အစောပိုင်းက ရေးတာလောက်နဲ့တင် မလုံလောက်လို့ လက်မခံတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် ခုတခါ နည်းနည်း အကျယ်ထပ်ချဲ့ ပြီးပြောမယ်။ နောက်တခါ စမရေးခင် လိုအပ်တယ်ထင်လို့ တခုလောက် ကြိုပြောထားချင်တယ်။ မိန်းမတွေခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာကို … Continue reading →